3 Mazano Ekuvaka Yakabudirira Chat Kushambadzira Chirongwa | Martech Zone
AI chatbots anogona kuvhura musuwo kune zvirinani dhijitari zviitiko uye nekuwedzera kushandurwa kwevatengi. Asi ivo vanogona zvakare tank yako yevatengi ruzivo. Heano maitiro ekuzviita nenzira kwayo.
Vatengi vanhasi vanotarisira kuti mabhizimusi aendese ruzivo rwega uye rwekuda kwemaawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pavhiki, mazuva makumi matatu nemazana matatu egore. Makambani mune ese maindasitiri anoda kuwedzera maitiro avo kuitira kuti vape vatengi kudzora kwavanotsvaga uye kushandura kuwanda kwekubata-kwepamusoro kusangana mukubhadhara vatengi.
Kuti uwane izvi, mabhizinesi mazhinji akatendeukira kune vane hungwaru vekutaura. Chatbots dzakasarudzika zvakasarudzika kuitisa dzakasarudzika dzakasarudzika uye nekukurumidza hurukuro, kusangana zvavanoda panguva imwe chete vachifambira mberi ivo kuburikidza nemutengi rwendo. Iyo chaiyo chatbot inogona kubvumira vatengi vako kuti vabvunze chero mubvunzo muChirungu chakajeka pane kuti vatore pamapeji ezvigadzirwa, mablog mablog, uye zvirimo zvekurodha pasi kuti vawane mhinduro dzavanoda. Iyo yakasarudzika chat zano inogona kunyange kukwevera huripo vatengi 'dhata muhurukuro kuitira kuti zvirinani kushandira zvavanoda uye kufambira mberi kwavo rwendo.
Nekudaro, mhinduro dzekutaura mukati uye dzadzo pachadzo hadzisi mushonga. Nepo mabhatani anoshanda akaburitsa kuwedzera kushandurwa kwepamhepo ne20 - 30 muzana, chirongwa chisina kunyatsorongwa chekutaura dzimwe nguva chinogona kukuvadza kupfuura kunaka. Asi kana chirongwa che chatbot chakanyatsorongwa uye nehunyanzvi kuurayiwa, zvinoita kuti zvive nyore kumabhizinesi kufambisa zvinotungamira kumberi nekukurumidza, zvakanyanya, uye pachiyero.
1. Isa Vateereri Vako Pakutanga
Paunenge uchigadzira yako AI chat mubatsiri, funga nezvemusika wako. Iwe unofanirwa kugadzira mumiririri wako zvichibva pane waunoziva vatengi vako kuti vave, kusanganisira kunzwisisa kwako kwemaitiro avo ehurukuro. Vateereri vako vanofarira kuseka uye runako? Kana ivo vanosarudza kuenda akananga kune iyo poindi? Paunenge iwe waziva wauri kutaura naye, iwe unozogona kuona wako mumiriri hunhu uye matauriro ezwi.
Isu tatoziva kuti kusarudzika kiyi yekutaurirana ...
80 muzana yevatengi vanoti vane mukana wekutenga kubva kukambani inopa zviitiko zvakaenderana.
Makumi mashanu Matanho Ekuratidza Simba Rekusarudza
Kune nzira dzisingaverengeke dzekuzivisa kubata wega. Tanga nekutaura nevatengi nemazita uye uchivabvunza nezvezvavanofarira kuvabatsira kuona chigadzirwa chako kana sevhisi seyakagadzirirwa zvavanoda. Paunonyanya kuziva nezve wako mutengi, zvichave nyore kuzoita yavo ye-yekutsigira rutsigiro.
Ruzivo rwekugadzira (AI) mumiriri anogona kushandisa data renzvimbo kubatsira kuratidza nzvimbo dziri nyore, semuenzaniso, kana kurangarira mazuva ekuzvarwa uye nhambo dzakakosha dzekupa madhora uye tsika yekupemberera. Asi kuita munhu hakugone kupfuura kukosha. kana mutengi achitsvaga rutsigiro rwehunyanzvi, wako akangwara chat mubatsiri haafanire kuvamanikidza kuburikidza nechitoro fanera. Ita shuwa kugadzirisa chinangwa chakataurwa nevatengi, kunyangwe izvo zvinoreva kupindura mibvunzo zvakananga kana kupa zvinongedzo kune zviwanikwa zvinobatsira.
Chimwe chiitiko chakakosha chakanakisa chekukurudzira nhaurwa kupfupika. Govera mhinduro dzakakura kuti uchengete vatengi vari munzira kwete kuvadzikisira nesarudzo, uye nekupindura kumibvunzo yakajairika ine ruzivo rweakaundi chero pazvinogoneka. Nenzira iyoyo, mumiriri wako anozobatanidza kuita kwemunhu uye kukosha mumhinduro pfupi dzinosangana uye dzinotarisira zvinodiwa nevatengi vako-chaiyo-nguva.
2. Gadzira Inobatsira uye Inonakidza Kukurukurirana Kunoshandura
Kuti uve nechokwadi chekuti mumiriri wekutaurirana ari kubatsira sezvinobvira, zvakakodzera kuti utore kunze kwekugona kuyerera kwekutaurirana. Fungidzira mashandiro anoita nevatengi vako uye kuronga kumberi kune zvinobudirira mhedzisiro, magumo akafa, uyezve maitiro ekubatana zvakare zvichienderana nezvavanogona mhinduro.
Wobva wavaka hwaro hweruzivo iyo yako AI mubatsiri yaanogona kupinda mairi kuitira kuti apedze iwo ma chat kuyerera zvinobudirira. Izvo zvakanyanya zvinhu mune yako ruzivo base zviri nani; iwe unogona kusanganisira akajairwa mameseji, anowanzo bvunzwa mibvunzo, zvinobatsira zvinongedzo, chigadzirwa tsananguro, uye zvimwe. Kana yako chatbot chikuva inogona kubata zvemultimedia zvemukati, iwe unogona kuronga izvo zvinoonekwa zvinhu mune yako ruzivo base zvakare. Semuenzaniso, maGIF, mavhidhiyo, zvitambi, magirafu, mabhatani, uye mamwe mafomu ezvigadzirwa zvemidhiya anogona kusimudzira hurukuro dzehurukuro nekuita kuti vasvetuke kubva pachiratidziri.
Zvakapfuma midhiya zvemukati zvinobatsira kupa vakangwara ekutaura evamiriri nehunhu uye zvinogadzira zvisingakanganwiki zviitiko zvevatengi, asi gara uchirangarira chinangwa chehurukuro. Kuisa pamberi pekujekesa kutenderedza zvinangwa zvemutengi wako (uye kugona kwemumiriri wako) kunovimbisa kugutsikana uye kuvabatsira kuti vasvike kwavari kuenda; MaGIF uye zvitambi zvinofanirwa kuve icing pane keke.
3. Dzivisa Iyo Yakajairika Misungo yeVabatsiri veKutaura
Imwe yemabhenefiti akakurisa evanoziva chat vabatsiri ndeyekuti vanova nani nekufamba kwenguva. AI-powered vamiririri vanodzidza kuburikidza neruzivo uye nekuvandudza sezvavanopedza zvakanyanya uye nekuwedzera hurukuro. Nezvo zvataurwa, haimbove zano rakanaka kuseta isina kudzidziswa chatbot yakasununguka pane vatengi chaivo. Ita kuti vashandi vako vaedze mumiririri wako mukati usati waita kuti zviwanikwe kune vakawandisa bvunzo vateereri uye pakupedzisira voregedzera kuruzhinji. Iwe unofanirwa kuenderera uchiona mashandiro uye kuunganidza mhinduro kuti uve nechokwadi chekuti mumiriri ari kunyatso kuvandudza uye kudzidza, kunyangwe post-kuvhurwa.
Kuti ubudirire kuongorora wako ane njere mumiriri, sarudza nezve mashandiro metric iwe auchazoteedzera kubva pazuva rekutanga. Sarudza maitiro aunoyera nawo budiriro uye kuona maKPI senge hurukuro dzese, chiyero chekubata, nguva, uye kupihwa uye chiyero chekudzoka. Izvo zvinokubatsira iwe kugadzira magiraidhi emumiriri wako kuti arambe achivandudza akananga kune ayo chaiwo zvinangwa, achigara achidzungaira kune chat kukwana.
Hazvina mhosva kuti muridzi wako weAI anonyatsoita sei, vatengi dzimwe nguva vangangoda intuitive off-ramp kune imwe mhando yekudyidzana. Smooth pamusoro peiyo handoff kusvika kune yekutengesa, inorarama mumiririri, kana kunyangwe yakatsaurwa kero yeemail kuitira kuti igadzire nyore uye isina musono shanduko uye kudzivirira kusagadzikana kwevatengi kana kudonhedza. Kunyangwe iyo-ramp inofanira kubatsira vatengi kuzadzisa zvinangwa zvavo zvataurwa uye vovafambisa kuburikidza nefanera.
Chero maindasitiri auri uye chero vatengi vako vari, akangwara chat kukurisa inzira ine simba yekuendesa zvetsika zviitiko zvinoshandura.
Tags: aiai Assistantchakagadzirwa njereBotbotcoBotco.aitauriranaichat agentchat mubatsirichat chatkukurukurachatbotsales salesnel